October 24, 2020 – Voice of Myanmar
အောက်တိုဘာ၂၄-၂၀၂၀ ယဉ်ပပထွန်း(VOM) NLD ကိုဝန်းရံသူတွေ အင်အားပြတဲ့အချိန် တခြားပါတီဝင်တွေနဲ့ပြသာနာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပေါ် တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လွန်ကဲမူအပြုအမူတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့NLDရဲ့ထုတ်ပြန်ထားမူက ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကို ထိန်းဖို့မကြိုးစားဘဲ အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကို ပြည်သူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့အပြင် နိုင်ငံရေးမှာမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အတွင်းအရေးမှူး ဒေါက်တာနဒ္ဒာလှမြင့်က VOM ကိုပြောါတယ် ။ ” အဲ့လိုရေးသားထုတ်ပြန်မူမျိုးက မဖြစ်သင့်ပါဘူး ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာရော၊ video ဖိုင်တွေမှာရော အထောက်အထားတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ပြဿနာဖြစ်တာကိုကြည့်ရင် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက စတယ်၊လုပ်တယ် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကြောင့် ပြဿနာတတ်နေတယ်ဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မြင်ကြသိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေနဲ့ကတော့ မည်သည့်ပါတီနဲ့မှ ပြဿနာမဖြစ်ဖို့တစ်ဖက်ပါတီကရှိလာရင်လည်း ဥပဒေအရဖြေရှင်းဖို့၊ မူးယစ်ရမ်းကားမူလုံးဝမလုပ်ဖို့၊ ရန်မစွဖို့သေချာမှာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအပေါ်မှာ ဘာမှအသိအမှတ်ပြုစရာအကြောင်းမရှိဘူး ။ ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကို ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်။ ပြည်သူကပဲ အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှတုန့်ပြန်စရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး”လို့ ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလိုထုတ်ပြန်တာက အာဏာရပါတီကြီးအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမူမရှိစွာ ထင်ထင်ရှားရှားရေးသားလိုက်တဲ့…
ကျောက်တော်မြို့ပေါ် မှာ စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်တိုးပြီး စားဝတ်နေရေး အကူအညီတွေလိုအပ်နေ
အောက်တိုဘာ ၂၄-၂၀၂၀ ထက်အောင်စိုင်း (VOM) ကျောက်တော်မြို့ပေါ်မှာ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ (၄၀၀)ခန့် ထပ်တိုးလာပြီး အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အပြင် အရင်က စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလည်း စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောပါတယ်။ ကျောက်တော်မြို့ပေါ်မှာ စစ်ဘေးရှောင် (၁) သောင်းကျော်လောက်ရှိကြောင်းနဲ့ အရင်က မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာ အိမ်ငှားနေထိုင်သူတွေဟာလည်း စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်စခန်း(IDP Camp)တွေကို လာရောက်ခိုလှုံခွင့် တောင်းဆိုနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့ နေရပ်ပြန်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေပြီး တချို့ဒေသခံတွေဟာ ဒေသတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့အခါ မိမိတို့ရွာကို ပြန်သွားတာတွေရှိပေမယ့် ကျေးရွာတွင်းမှာ ပစ်ခတ်သံတွေကြားရတဲ့အခါမှာတော့ ပြန်လည်ထွက်ပြေးရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ စစ်ဘေးရှောင်တွေကို ကူညီသူတွေက ပြောပါတယ်။ ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်း ပြီးခဲ့တဲ့လက တောင်ပေါက်နဲ့ ဘုရားပေါင်း ကျေးရွာနှစ်ခုမီးရှို့ခံရပြီးနောက် အဲဒီကျေးရွာတွေက ဒေသခံ (၄၀၀) လောက်ဟာ ပထမမှာ နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေကို ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ရကြောင်းနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲ ကျောက်တော်မြို့ပေါ်က စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ…
တပ်မတော်က ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖို့ပြောထားတဲ့ ပလက်ဝမှာ အစိုးရက ဘာကြောင့် ကျင်းပချင်တာလဲ
အောက်တိုဘာ ၂၄-၂၀၂၀ ကိုလတ် (VOM) တပ်မတော်အနေနဲ့ နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ ပလက်ဝမြို့မှာ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖို့ အကြံပြုတင်ပြခဲ့ပေမယ့် အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ အဲ့ဒီနယ်မြေမှာ ကျင်းပနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့က ဘယ်လိုအကြံပြုထားတယ်ဆိုတဲ့ အချိုးတွေ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တု့ိက နယ်မြေ ၃၃၀/ ၂၇၁/ ၂၀/ ၃၉ ဆိုတာ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ၃၉ နယ်မြေထဲမှာ ပလက်ဝပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပလက်ဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ညှိနှိုင်းတယ်၊ ညှိနှိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ မဖြစ်မနေလုပ်ပေးပါပြောတယ်။ ပြောတဲ့အတွက် လုပ်ပေးပါတယ်”လို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ နေပြည်တော် စစ်သမိုင်းပြတိုက်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးမြန်းမှုအပေါ် ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် အဲ့ဒီနယ်မြေမှာ အစိုးရအနေနဲ့ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်လုပ်ချင်တာလဲလို့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးမြန်းမှုကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက “ပလက်ဝမှာတော့ သူတို့ ကျင်းပချင်ပါတယ်လို့…
တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာ အဖြည့်ခံတွေလား ?
တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာ အဖြည့်ခံတွေလား ? စစ်တွေ၊ အောက်တိုဘာ ၂၄- ၂၀၂၀ ထက်အောင်စိုင်း (VOM) “တပါတီတည်းက အနိုင်ရဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အပြုအမှု၊ အပြောအဆိုတွေကြားမှာ ကျမတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုထဲက တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာ အိမ်ဖြည့်သဘောမျိုးလို အရောင်ပြသဘောမျိုလား” လာမယ့် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက မြို့နယ် (၉) ခုလုံးအပါအဝင် ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းက ရပ်ကွက် (၁၅) ခုနဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း (၁၃၇) အုပ်စုကို ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဒေါ်အေးနုစိန် ကို VOM ကမေးမြန်းစဉ်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ အလယ်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာသာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအနေနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခရှိရှိနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရလိုကြောင်း ဒေါ်အေးနုစိန်က ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့…
Election, Interview, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို, ပါတီမိတ်ဆက်Leaveacomment
ဒါကာ၊ အောက်တိုဘာ-၂၄-၂၀၂၀ မျိုးဆက် (VOM) ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အာမခံချက်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ The Nation သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုတွေကို ပြန်စဖို့မြန်မာနိုင်ငံက ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယီက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုမန်ကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအခြေအနေတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမယ့်အချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ မြန်မာဘက်က တရုတ်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယီကတော့ တရုတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ မြန်မာတို့အကြား သံအမတ်ကြီးတွေအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေအကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့ အဆိုပါပြုထားပါတယ်။ ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို ဒါကာမှာ ကျင်းပနိုင်တယ်လို့ ဝမ်ယီကဆိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးလာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို သုံးနှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်ထိ နေရပ်ပြန်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ် မစတင်နိုင်တာကို…
ကာဘိုးက အနီနဲ့အစိမ်း ပဋိပက္ခမှာ အနီဝန်းရံသူတယောက်သေဆုံး
အောက်တိုဘာ ၂၄-၂၀၂၀ ကိုတိုးကြီး (VOM) စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ကာဘိုးကျေးရွာအနီး ကာဘိုး-မူးလမ်းဆုံ နေရာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ NLD အောင်နိုင်ရေး ယာဉ်တန်းနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အောင်နိုင်ရေး ယာဉ်တန်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီး ရိုက်နှက်ကြရာ NLD ပါတီ ဝန်းရံသူ လူငယ်တစ်ယောက် ရိုက်နှက်ခံရလို့ ဦးခေါင်း ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာရပြီး မန္တလေး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှုခံယူရင်း အောက်တိုဘာ ၂၄ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ကန့်ဘလူသို့ အပြန်လမ်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၂ ညနေပိုင်းက ကန့်ဘလူမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ ဝန်းရံ ထောက်ခံသူ လူအင်အား ၁၈၀၀ ကျော်ဟာ ကား အစီး ၇ဝ၊ ဆိုင်ကယ် အစီး ၁၅၀ ကျော်နဲ့ ထန်းကုန် – ကာဘိုး တန့်ဆည်လမ်းအတိုင်း ပါတီအောင်းနိုင်ရေး မဲဆွယ်ယာဉ်တန်းနဲ့ လှည့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ…
တရုတ်ကလာတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေပါလာနိုင်လို့ မြောက်ကိုရီးယား သတိပေး
ပြုံးယမ်း၊ အောက်တိုဘာ-၂၄-၂၀၂၀ မျိုးဆက် (VOM) တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ အဝါရောင်ဖုန်မှုန့်တွေထဲမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပါဝင်လာနိုင်တာကြောင့် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အိမ်ထဲမှာသာနေကြဖို့ မြောက်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေက သတိပေးထားပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ဒီလိုသတိပေးလိုက်တာကြောင့် မြို့တော်ပြုံးယမ်းရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာ လူသွားလူလာတွေ တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်သွားပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုမရှိဘူးလို့ အခိုင်အမာဆိုထားပေမယ့် နိုင်ငံနယ်စပ်တွေကို ပိတ်သိမ်းတာတွေနဲ့ သွားလာမှုတွေကို ကန့်သတ်တာတွေအပါအဝင် ဇန်နဝါရီလကတည်းက အမြင့်ဆုံးတပ်လှန့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေ ရာသီအလိုက်လာလေ့ရှိတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြား ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိ သေချာမသိရသေးပါဘူး။ ဒီဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တာဟာ မြောက်ကိုရီးယား တစ်နိုင်ငံတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံကလည်း ဗိုင်းရပ်စ်တွေပါဝင်လာနိုင်တဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေမရှူမိအောင် နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေ တပ်ဆင်ဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။ အဝါရောင်ဖုန်မှုန့်တွေဟာ မွန်ဂိုလီးယားနဲ့ တရုတ်သဲကန္တာရတွေကို ဖြတ်သန်းပြီး တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတို့ကို နှစ်စဉ် ဝင်ရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဖုန်မှုန့်တွေကြောင့် နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ နှစ်အတန်ကြာကတည်းက မြင့်တက်နေပါတယ်။ Ref…
အောက်တိုဘာ ၂၄-၂၀၂၀ ကိုတိုးကြီး (VOM) စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ ကုလားကြီးကျေးရွာမှာ NLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေး သီချင်းဖွင့်ပြီး ကနေတဲ့သူတွေနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဝန်းရံထောက်ခံသူတွေဟာ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် ညပိုင်းက နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ရိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကုလားကြီးကျေးရွာက နေအိမ်တစ်အိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်မှာ NLD ပါတီ ဝန်းရံထောက်ခံသူ မိန်းကလေးတစ်စုဟာ ပါတီအောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်သီချင်းဖွင့်ပြီး ကနေတဲ့အချိန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဝန်းရံထောက်ခံသူ လူငယ်တစ်စုဟာ အဲ့ဒီလမ်းပေါ် ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့အခါ စကားများပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် နှစ်ဘက်ပါတီ ဝန်းရံထောက်ခံသူတွေဟာ အပြန်အလှန်ရိုက်ကြတာကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၇ ယောက်ရှိပြီး ရရှိဒဏ်ရာတွေဟာ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် ချောင်းဦးပြည်သူ့ဆေးရုံကနေ မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ပြောင်းရွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ကုလားကြီးကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေ သိရပါတယ်။ “လမ်းပေါ်မှာ ကနေတဲ့သူတွေနဲ့ လမ်းသွားတဲ့သူတွေ ညှိပြီး ရိုက်ကြတာပါ ၊…
အမျိုးသမီးတွေ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာ များများပါဝင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်နန်းရီရီဝင်း
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် အမျိုးသမီးတွေ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာ များများပါဝင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်နန်းရီရီဝင်း တောင်ကြီး၊ အောက်တိုဘာ- ၂၄- ၂၀၂၀ နေနန်းနွယ်(VOM) တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) ကိုယ်စားပြုပြီး ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO) ကနေ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ့် ဒေါ်နန်းရီရီဝင်း ကို VOM သတင်းထောက် မနေနေနန်းနွယ်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ #VOM #VoiceofMyanmar #ပါတီမိတ်ဆက် #နန်းရီရီဝင်း Zawgyi ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္ အမ်ိဳးသမီးေတြ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမွာ မ်ားမ်ားပါဝင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ေဒၚနန္းရီရီဝင္း ေတာင္ႀကီး၊ ေအာက္တိုဘာ- ၂၄- ၂၀၂၀ ေနနန္းႏြယ္(VOM) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ကိုယ္စားျပဳၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ကေန ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ့္ ေဒၚနန္းရီရီဝင္း ကို VOM သတင္းေထာက္ မေနေနနန္းႏြယ္က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ #VOM #VoiceofMyanmar #ပါတီမိတ္ဆက္…
Election, Interview, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက်, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို, ပါတီမိတ်ဆက်Leaveacomment
အောက်တိုဘာ ၂၄-၂၀၂၀ အေးချမ်းသူ(VOM) ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပနိူင်ချေရှိတယ်လို့ ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထင်ကျော်က VOMကိုပြောပါတယ်။ “ပါတီတွေကလည်း တင်ပြတယ်။ ၄ ပါတီ SNLD၊ SDPN၊ USDP၊ NLD ရယ် ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းတင်ပြတယ်။ရွေးကော်ကလည်း ပြန်လည်းသုံးသပ်ဖို့ ကျနော်တို့ကိုစာတောင်းတယ်။ ကျနော်ထင်တယ်ဗျ မိုင်းကိုင်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိူင်ချေရှိတယ်။ ဒါက ကျနော့အမြင်ပြောတာနော်”လို့ ဦးထင်ကျော်ကပြောပါတယ်။ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ကို ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပနိူင်ဖို့အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ဆီကနေ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အကြံပြုချက်တွေတောင်းခံခဲ့တဲ့အတွက် ပြန်လည်ကျင်းပနိူင်ချေရှိတယ်လို့ ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထင်ကျော်က VOMကိုပြောပါတယ်။ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ပြုဖို့ အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၄ ခုက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပြန်လည်တင်ပြထားတယ်လို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(SNLD)မှ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုး(၁) စိုင်းကျော်ညွန့်က VOMကိုပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့ရယ် ကျားဖြူပါတီရယ် ၊ USDPရယ်၊ NLDရယ်စုပြီး အောက်တိုဘာ ၂၂ရက်နေ့ကျတော့ ဒေသခံပြည်သူတစ်သောင်းရဲ့လက်မှတ်နဲ့ ထပ်တင်သေးတယ်”လို့…